uSodolophu uCeba T.Khanyile uhlisiwe kwisikhundla sakhe sobunkokheli kumasipala i-O.R.Tambo
07 EyeDwarha 2021
IBhunga likaMasipala wase-O.R. Tambo limsusile lowo obengu Sodolophu wendawo uCeba T Sokhanyile kwisikhundla sakhe sobunkokheli.
Kwintlanganiso yebhunga elikhethekileyo likamasipala wesithili i-O.R. Tambo, ibibanjwe izolo ngomhla we-6 ku-Okthobha ka-2021, ibhunga lithathe isigqibo ngamxhelomnye sokususa uCeba uT.Sokhanyile njengoSodolophu wendawo kodwa baphinda bamgcina njengelungu eliqhelekileyo lebhunga likamasipala wase-OR Tambo.
Ngaphandle kooceba ababini abakhethe ukuvota ngokuchasene nesindululo onke amanye amagosa avumelelne nesi-sindululo. Ibhunga likamasipala wesithili se-O.R.Tambo sigqibe kwelokuba onke amagunya nomsebenzi kaSodolophu olawulayo kufuneka agqithiselwe kuSekela Sodolophu uCeba Nogumla
Isigqibo sokususa uSodolophu weSigqeba besisekwe kumaxa amaninzi apho bekubonakala ukuba isikhundla esi sakhe siyamohlula, akakwazi ukufezekisa izibophelelo zakhe eziquka ukwazi ukuphendula imibuzo ngeenkqubo zawo umasipala lona. Esinye kwizikhalazo zebhunga ibisisimo sakhe esiphazamisayo esibeke esichengeni ukuhombela kwebhunga kwaye ubukhulu becala ukungafuni kwakhe ukuphendula kwiikomiti zebhunga ingakumbi ezo zibekwe uxanduva lokuphanda urhwaphilizo, ubuqhetseba kunye nokuxoka.
Isigqeba esi sithe uSodolophu ubonakalise ukungaphumeleli ngokupheleleyo kunye nokusilela kobunkokheli ekubambeni isikhundla esiphakamileyo esinokubeka esichengeni amandla oMasipala wesithili i-O.R.Tambo ukuhambisa iinkonzo kubantu balendawo.
Esinye kwizizathu ezibangele isigqeba esi ukuba simhlise uSodolophu kwisikhundla zizityholo zokuba ukhusela ngamandla igosa elithile elibambe isikhundla solawulo uMnu Matomela, otyholwa ngokubandakanyeka ngokunzulu kubuqhophololo, ngokuba wacebisa kwaye wavuma intlawulo ezizigidi ezingama-28 (28 million). Ngokwemimiselo kamasipala umntu/igosa elinye alinayo imvume yoku-sayinela imali engaka ngaxeshanye.
Isigqeba esi sithi isigqibo sokususa uCeba Sokhanyile khange sibe lula, kuba wanikwa amathuba amaninzi okuba abeyinxalenye yeqela eliqinisekisa ulawulo olu lungileyo,olungenachaphaza kunye nokususa urhwaphilizo kumasipala.
Lityeli lokuqala ukuba iqela elilawulayo kunye nabachasi kwibhunga bafikelele kwisigqibo sinje ngamxhelo’mnye.
Onke amaqela ezopolitiko kubandakanya neeNkokheli zeMveli kwibhunga avumile ngokupheleleyo kwaye ayiphindaphinda le nto ukuba yinto ebekudala ilindeleke ukuba yenzeke. Ibhunga liphinde latsho ukuba esi isigqibo sikwenzelwe ukunceda ulawulo ekwenzeni imisebenzi yalo ngaphandle koloyiko okanye ukwenzelela.